Midowga Musharaxiinta oo sheegay in dowladda Federaalka ay walwal gelisay waalidiinta wiilashooda ka maqan | Allbalcad Online
Home WARARKA Midowga Musharaxiinta oo sheegay in dowladda Federaalka ay walwal gelisay waalidiinta wiilashooda...
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta ku shiray Muqdisho ayaa uga digay dowladda Federaalka inay siyaasadeyso walaaca waalidiinta Soomaaliyeed ee ka maqan wiilashooda, kuwaasoo aanan laga war heyn xaaladooda dhabta ah.
Afhayeenka Midowga Musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo warbaahinta la hadlay kaddib shir Musharaxiinta saaka yeesheen ayaa wax laga xumaado in dhalinyarada maqan, walwalka waalidiinta iyo jawaab la’aanta Xukuumadda oo ay ku tilmaamtay mid siyaasad loo adeegsaday.
Waxaa u sheegay in waalidiinta Soomaaliyeed ay si joogta ah u soo bandhigayeen walaacooda ku aadan wiilasha ka maqan ee tababarka loogu qaaday Eritrea oo aanay weli dowladda si dhab ah uga hadal xaalada dhalinyaradaas.
“Ma sahlano tirada la sheegayo ee dhalinyarada oo aad u badan, waalidiintood wax war ah kama hayaan, waxa ay joogto uga hadlayaan Warbaahinta, Baraha Bulshada iyo dibadbaxyo ay dhigayaan si ay u helaan jawaabta ay u baahan yihiin oo ah xogta dhalinyarada ka maqan” ayuu yiri Ridwaan Xirsi.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Wasiirka Warfaafinta uu ka meer meeray kana gaabsaday in dhalinyarada maqan loo qaaday dalka Eritrea.
“Dhalinyarada faraha badan ee la geeyay Eritrea markii la weydiiyay Wasiirku uu ka jawaabi waayay oo uu ka meereystay, taasi waxa ay welwel hor leh ku ridday waalidka cabanaya maadaama aysan gareyn halka la geeyay” ayuu yiri Ridwaan.
Baraha bulshada ayaa si weyn loogu qoray wararka sheegaya in ciidamo Soomaaliyeed oo dowladda Tababar u dirtay dalka Eritrea inay ka qeyb qaateen dagaalka Gobolka Tigray, hase ahaatee dowladda Federaalka ayaa beenisay wararkaas, iyadoo waalidiin fara badan oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in carruurtooda ay war iyo wacaal ka la’yihiin.
Previous articleDibadbaxyo xooggan oo ka socda Tuunisiya
Next articleWasiir Arrimo Dibadeed oo u geeriyooday Coronavirus